Eto an-toerana, hatrany ivelany; mitory amin’ny gadona maroloko ny Groupe Lydia - ewa.mg
Eto an-toerana, hatrany ivelany; mitory amin’ny gadona maroloko ny Groupe Lydia
News - Eto an-toerana, hatrany ivelany; mitory amin’ny gadona maroloko ny Groupe Lydia
Taona 2000, nijoro ny Groupe Lydia.
Antom-pisiany ny hitory ny Filazantsara eto an-tanindrazana hatrany
dilambato amin’ny alalan’ny hira sy mozika ary dihy. Ho
fanatanterahana izany, milalao gadonkira maro ny tarika. Ao ny
milamina toy ny slow, ny jazz… Misandrahaka amina gadona
mihetsika tahaka ny rock sy reggae ihany koa. Ny avy eto
an-toerana toy ny bagasy, ny hiragasy. Taratra io, tamin’ny
fampiaraham-peon’i Lydia sy i Bakomanga tamin’ny « Ry mpiray
tanindrazana ». Ankoatra ny Malagasy ofisialy, mahafolaka
tenim-paritra avy amin’ny lafivalon’ny Nosy ny Groupe Lydia.
Hoentina hanamorana ny fampitan-kafatra raiketin’ireo tononkira
avokoa izany, raha ny fanazavany.
Anisan’ny vinanasan’izy 12
mianadahy mandrafitra ny tarika ny fitoriana an-kira goavana hatao
eto an-dRenivohitra. Mialoha izany, efa namoaka ny kapila mangirana
« Aza mora kivy » mirakitra hira 11 ny tarika. Ampahany
amin’ireo hira ao anatiny ny « I really love You »,
« Il est mort à ma place », « Masina ianao »,
« Allô tsika lahaby », « Aza mora kivy »… Ny 26
septambra 2019, naneho ny kolontsaina malagasy (hira sy dihy) tany
Beijing i Lydia, nandritra ny hetsika foara lehibe notanterahana
L’article Eto an-toerana, hatrany ivelany; mitory amin’ny gadona maroloko ny Groupe Lydia a été récupéré chez Newsmada.
Tratra nanao firaisana tamin’ny ankizy 14 taona: vazahalahy mpizahatany iray nidoboka am-ponja
Tratran’ny polisy misahana ny ankizy tsy ampy taona nanao firaisana tamin’ny ankizivavikely vao 14 taona, tao amina hotely, ny alakamisy teo ity teratany vahiny mpizahatany ity. Naiditra am-ponja avy hatrany izy taorian’ny nanolorana azy teny amin’ny fitsarana. Tratra ambodiomby tao amina trano fandraisam-bahiny iray teny amorondriaka io lehilahy 65 taona io. Hita tamin’izany koa ny tovovavy maromaro, izay nilahatra ho amin’io lehilahy mpizahatany io. « Nisy ny fidinana teny an-toerana nataonay avy ao amin’ny PMPM. Teo koa ny fiaraha-miasa amin’ny brigade féminine de proximité ka tratra ambodiomby ilay vazaha », hoy ny fanazavan-dRajaonarivo France Olga, chef de division PMPM ao Toliara. Nambarany fa maro koa ireo tovovavy efa niandry ilay lehilahy teo an-toerana, nitsoaka avokoa vao nahita ny mpitandro filaminana. Taorian’izay, nosamborina avy hatrany ilay vazaha ary natao fanadihadiana teny amin’ny biraon’ny polisy. Niakatra fitsarana, afakomaly, ny raharaha ary nidoboka am-ponja ao amin’ny fonjaben’i Toliara izy.Henjehin’ny lalàna…Sazy dimy ka hatramin’ny 10 taona an-tranomaizina, miampy lamandy mitentina 4 ka hatramin’ny 20 tapitrisa Ar ny mety hahazo an’io mpiazahatany teratany soisy io tamin’ny filan-dratsy nataony. Hentitra ny polisy misahana ny ankizy tsy ampy taona amin’ny tokony ho fanaraha-maso ataon’ny ray aman-dreniny ny zanany. « Eto izahay dia hanara-maso ireo ray aman-dreny tsy mandray andraikitra amin’ny fanaraha-maso ny zanany. Misazy koa, araka izany, ireo ray aman-dreny minia mandefa ny zanany tsy ampy taona hivaro-tena » hoy hatrany ny polisy ao an-toerana.Araka ny fanazavana voaray, nahatratra 27 isa ny trangana fanolanana zaza na ankizy tsy ampy taona voarain’ny polisin’ny PMPM, hatramin’ny volana marsa teo. Manentana ny rehetra, araka izany, ny polisy amin’ny fandraisana andraikitry ny tsirairay amin’ny fanomezam-baovao mikasika ny tranga toy izao ho fiarovana ny zaza malagasy. Misy ny laharana maitso 147 sy 813 azo antsoina raha misy trangana herisetra mahazo ny zaza na ankizy tsy ampy taona. Nilaza koa ny polisim-pirenea fa azo enjehin’ny lalàna ireo olona mahafantatra na mahita trangana fanodinkodinana na fanararaotana zaza na ankizy tsy ampy taona kanefa tsy mitoroka eny anivon’ny mpitandro filaminana. Henintsoa HaniL’article Tratra nanao firaisana tamin’ny ankizy 14 taona: vazahalahy mpizahatany iray nidoboka am-ponja a été récupéré chez Newsmada.
IKM Antsahavola : Hovelabelarina ny momba ny sikidy
Fomba ary faminaniana malagasy. Hovelabelarina etsy amin’ny Ivon-toeran’ny kolontsaina malagasy, na ny IKM Etsy Antsahavola ny momba ny sikidy. Ny sikidy izay fomba iray entina haminaniana, na haminavinana ny ho avy miainga amin’ireo voan-javatra sy voanjava-maniry samihafa. Eris Rabedaoro no hitondra izany ny zoma 30 novambra ho avy izao, manomboka amin’ny 6 ora hariva. Hovelabelariny amin’izany ny fahalalana teo amin’ny Ntaolo, mahakasika ireo zava-misy sy zava-manan’aina manodidina azy. Teo amin’ny Malagasy rahateo dia tsy napetrapetra-poana, fa saika misy dikany sy misy heviny avokoa ny zavatra rehetra manodidina ny olombelona, miainga avy amin’ny fandinihina azy ireny. Ara-tantara dia avy tamin’ny arabo ny sikidy, izany hoe tamin’ny niparitahan’ny finoana silamo taty Afrika. Tany anaty karazana boky amin’ny teny arabo rahateo no nahitana izany. Hatramin’izay dia manana anjara toerana lehibe teo amin’ny fiaraha-monina ny sikidy. Porofon’izany ny fanajan’ny fiarahamonina ny mpisikidy, ny fanatanterahana an-tsakany sy an-davany, na dia sarotra aza izay baiko omeny. Malagasy tanora mpandalina ny maha-malagasy i Eris Raberaodo izay hitondra ny famelabelarana. Efa maro ireo hetsika nataony ho fizarana amin’ny rehetra ny maha-malagasy, raha tsy hitanisa afa-tsy ny « Raokandro Malagasy », « Alahamadibe »… Filoha mpitantana ny fikambanana Iray ihany koa izy. Miarantsoa L’article IKM Antsahavola : Hovelabelarina ny momba ny sikidy est apparu en premier sur .L’article IKM Antsahavola : Hovelabelarina ny momba ny sikidy a été récupéré chez Triatra.
Fanomanana fanadinam-panjakana :: Malalaka ny safidy hamerina mpianatra any an-tsekoly
Nanome malalaka ireo talen-tsekoly amin’ny fiverenan’ny mpianatra manala fanadinana an-dakilasy hanao famerenana, ny avy ao amin’ ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Voafaritra avokoa ireo daty hanatanterahana ny fanadinam-panjakana Cepe sy Bepc, tamin’ ny fandaharana manokana nataon’ny Filoha, tamin’ny alahady lasa teo, tao amin’ny Fahitalavi-pirenena. Afaka herinandro mahery kely sisa dia hiatrika ny fanadinana ireo mpanala Cepe. Hanomboka amin’ity herinandro ity ny fizaràna ny taratasy fiantsoana ho an’ny eto amin’ny Cisco Antananarivo renivohitra. « Omena alalana ireo sekoly manerana an’i Madagasikara hamerina ny mpianatra ho any an-tsekoly. Roa andro fotsiny dia ampy hamerenan-desona ho an’ireo efa nahavita fandaharam-pianarana manontolo. Apetraka amin’ny fahendren’ny talentsekoly tsirairay avy ny fanaovana an’izany », hoy ny minisitra Dr Sahondrarimalala Marie Michelle, tao amin’ny Fahitalavi-pirenena, omaly. Efa misy ireo sekoly tsy miankina no hamerina ny mpianatra kilasim-panadinana an-tsekoly manomboka anio, toy ny lisea Marie Manjaka Andohalo. Fahavononana Notsindriany fa efa vonona ny minisitera amin’ny fanatontosana ny fanadinana. Hovitaina amin’ity herinandro ity ny fandefasana ireo laza adina manerana ny Nosy. Amin’ny alakamisy sy zoma ho avy izao no hakan’ny mpiadina hiatrika ny fanadinam-panjakana Cepe ny taratasy fiantsoana any amin’ny sekoly misy azy, ho an’ny Cisco Antananarivo renivohitra. Amin’ny alatsinainy 31 aogositra kosa vao afaka mijery ny efitranompanadinana. Efa manomboka ihany koa ny fanomanana ireo efitranom-panadinana, amin’izao fotoana izao. Voafaritra toy izao ireo daty hanatanterahana ny Cepe sy Bepc : amin’ny 1 septambra ny Cepe ho an’ny faritra enina (Diana, Sava, Analamanga, Itasy, Vakinankaratra ary Bongolova); amin’ny 8 septambra 2020 no hiatrika ny Cepe ny mpiadina ao amin’ny faritra sivy (Sofia, Boeny, Melaky, Betsiboka, Matsiatra ambony, Ihorombe, Atsimo Atsinanana, Amoron’i Mania ary Vatovavy Fitovinany); amin’ny 15 septambra kosa no hanatanterahana ny Cepe ho an’ireo faritra fito ambiny (Atsimo Andrefana, Anosy, Androy, Menabe, Analanjirofo, Atsinanana ary Alaotra Mangoro). Hotanterahina amin’ny 21 hatramin’ny 24 septambra ny Bepc. L’article Fanomanana fanadinam-panjakana :: Malalaka ny safidy hamerina mpianatra any an-tsekoly est apparu en premier sur AoRaha.
«LA MAIN DE L’OCEAN INDIEN»: namoaka ny boky angano i Masoandrontsoa.
Tsy ny tontolon’ny filalaovana tantara an’onjampeo ihany no nahafantarana an’i Rojo, amin’ilay feo feno angola mamy fa eo ihany koa ny tontolon’ny fanoratana amin’ny endriny maro, anisan’izany ny Angano…Tsy angano angano intsony, efa vita ny boky mirakitra ny angano “La main de l’océan indien” nosoratan’ i Ma­soandrontsoa. Boky angano ahitana takila 40, natao amin’ny teny frantsay izy ity. Natonta tsy ela akory tao anatin’ny fihibohana, tany Frantsa. Boky faharoa, taorian’ny «Ampelahasinoro», izay boky tantara foronina amin’ ny teny malagasy ranoiray. «Na­tao tamin’ny teny frantsay ilay boky satria io no teny iraisana sy hifankahazoana voalohany amin’ireo Nosy ao amin’ny Ra­no­masimbe Indianina. Ny boky rahateo mitantara ny hakan­ton’ireo Nosy ao amin’ny Ra­no­ma­simbe Indianina ireo ka An­dri­amatoa Foudi rouge (Foudia madagascariensis, na Fodilahy mena, hoy isika) no hitondra antsika hitety azy ireo ao anatin’ity boky “La main de l’océan indien” ity» hoy i Masoan­dron­tsoa, nanazava momba ny boky. Manandratra ny kolontsaina amin’ny alalan’ny tenyRanaivoarisoa Rojontsoa Tsi­hoarana na Rojo Ra­nai­vo­arisoa eo amin’ny tontolon’ny tan­tara an’onjampeo na Ma­soandrontsoa, anarana isalorana amin’ny maha mpanoratra. Ny taona 2003 no niditra teo amin’ ny tontolon’ny literatiora mala­gasy. Efa maro ny sehatra nanehoany ny maha izy azy, indrindra ny famelomana tantara an’ onjampeo, izay tena nahafantaran’ny maro azy. “ Ao an-tsaina hatrany ny hanandratana ny kolontsaina amin’ny alalan’ny teny, indrindra ny mahakasika an’i Madagasikara sy ny kanto mahafinaritra ao aminy, izany no tena ilofosako eo amin’ny ton­tolon’ny zavakanto malagasy” hoy i Masoandrontsoa, nilaza ny tanjony amin’ny literatiora malagasy. Anisan’ny ezaka amin’ny fanitarana ny tontolon’ny literatiora malagasy ho fantatra eran-tany ny fandikana sy fanoratana ny sanganasa amin’ ny teny vahiny amin’ny alalan’ ny fanahy malagasy ao anatiny.NarilalaL’article «LA MAIN DE L’OCEAN INDIEN»: namoaka ny boky angano i Masoandrontsoa. a été récupéré chez Newsmada.
Sakafia – Amboasary Atsimo: avotry ny miaramila ny ankizilahikely nataon’ny dahalo takalonaina
Nitrangana asan-dahalo mahery vaika tao amin’ny fokontany Sakafia, kaominina ambanivohitr’i Marotsiraka, distrikan’Amboasary Atsimo, afakomaly. Tsy vitan’izay fa mbola naka an-keriny zazalahikely iray 13 taona antsoina hoe Mahandry hatao takalonaina ireto malaso ireto. Nahazo antso ireo miaramila mpampandry tany “Zone rurale prioritaire de sécurité” Alpha 1 taorian’izay ka nanao avy hatrany ny fanarahan-dia. Nisy ny fiambenana ny kizo fieren’ireo dahalo ka nahitam-bokany satria azon’ny miaramila teo am-pelatanan’ireo dahalo ilay zazalahikely ary navelan’izy ireo tao amin’ny toerana antsoina hoe Ankira ny omby miisa 124.Fa omby miisa 37 hafa koa no azon’ireo miaramila mpampandry tany ihany tao amin’ny fokontany Agnalamaliniky, kaominina ambanivohitr’i Maromby, distrikan’Amboasary Atsimo, afakomaly. Taorian’ny fanarahan-dia nataon’ireo miaramila nampian’ny fokonolona no nahazoana ireto omby ireto taorian’ny fifandonana tamin’ny dahalo.Jean ClaudeL’article Sakafia – Amboasary Atsimo: avotry ny miaramila ny ankizilahikely nataon’ny dahalo takalonaina a été récupéré chez Newsmada.
Mozika maneran-tany :: Hifaninana amin’ny « Afrimma » indray i Shyn
Manana solontena amin’ilay fifaninanana maneran-tany momba ny mozika ankehitriny antsoina hoe « African Muzik Magazine Awards and Music Festival » na Afrimma 2020, amin’ny alalan’i Shyn indray, i Madagasikara. Hatao ny Dallas (Etazonia), amin’ny 15 novambra 2020, ny fanolorana ny amboara amin’io hetsika io, aorian’ny fifidianana hatao ao amin’ny pejy Facebook « Afrimma ». Nivoaka, tamin’ny 11 septambra lasa teo, ny lisitr’ireo mpanakanto voafantina ka nahatafiditra an’i Shyn tao anatin’ny sokajy « Best Male Southern Africa » na ireo mpanakanto lehilahy mendrika avy aty atsimon’i Afrika. Eo amin’ilay fanambaràna ao amin’ny pejy Facebook an’ny Afrimma, izay misy an’io sokajy io no hametrahana ny safidy amin’ny alalan’ny fanehoan-kevitra. L’article Mozika maneran-tany :: Hifaninana amin’ny « Afrimma » indray i Shyn est apparu en premier sur AoRaha.
Raharaham-pitsarana any Fianarantsoa :: Hadihadiana lalina ny fanolanana tao amin’ny akany iray
Mbola any am-ponja ny lehilahy iray voarohirohy tamin’ny raharaha fanolanana nihatra tamin’ny ankizy tao amin’ny toby fitaizana zaza kamboty iray any Fianarantsoa, volana vitsy lasa izay. Ao anatin’ny fanadihadiana lalina ny raharaha ny Fitsarana any an-toerana, amin’izao fotoana izao. Zaza efatra no fantatra fa niharan’ny fanolanana. Voampanga sy voarohirohy ho tompon’ antoka tamin’izany herisetra ara-pananahana izany ny lehilahy, vadin’ny mpanabe ao amin’ilay toby ihany. Ankizilahy iray, 17 taona, isan’ireo notezaina tao amin’ny akany no miaraka voampanga aminy. Natolotra ny Fitsarana izy ireo ary samy naiditra amponja vonjimaika. Arahin’ny mpanara-baovao maso akaiky ny fivoaran’ity tranga mampalahelo nihatra tamin’ny zaza ity. L’article Raharaham-pitsarana any Fianarantsoa :: Hadihadiana lalina ny fanolanana tao amin’ny akany iray est apparu en premier sur AoRaha.
Saripika – Nagamy Jean Fabrice: “Ny fitiavana no mampitombo talenta”
I Nagamy Jean Fabrice, dimy taona niseharana eo amin’ny tontolon’ny fakana sary na saripika. Vokatry ny fitiavana sy lovan-talenta ny nahatonga ny tovolahy nisehatra amin’izany satria mpaka sary ihany koa ny rainy. Teo ihany koa ny fifampikasohana tamina namana mpiara-nianatra teny Ankatso, manana traikefa amin’ny fakana sary, ka nampiroborobo ny talentany sy nahatongavany amin’izao dingana vitany izao.« Nanomboka teo aho dia lasa nanao fikarohana maro mahakasika ny sary sy ny momba ireo mpaka sary efa lasa lavitra na ny any ivelany na ny eto an-toerana. Tsapako fa maro ireo Malagasy manan-talenta ary tena tsy nampoiziko hahavita zavatra tena avo lenta sy kanto eo amin’ny tontolon’ny saripika”, hoy i Nagamy.Nohamafisiny fa, “… nanomboka teo ihany koa, tapa-kevitra fa hanangom-bola hividianana fitaovana. Nipoitra sy nitsidika ary nisokatra tsikelikely ny lalana sy ny hirika maromaro teo amin’ny sehatra ivelarana. Nazoto nizara ny zava-bita tamina tambajotran-tsosialy. Nihamaro ihany ireo matihanina nanorotoro sy nanitsy ahy rehefa misy zavatra tsy nety”. Tsy nandalo fianarana manokana ny tenany fa nanao fikarohana tamin’ny alalan’ny « internet » ary mazoto maka sary hatrany, manao fampiharana matetika. « Rehefa tsy ao anatinao ny fitiavana, tsy voatery amina sehatra fakana sary ihany fa na inona na inona sehatra, tsy ho lasa lavitra mihitsy ianao. Miantomboka amin’ny fitiavana sy ny finiavana aloha izay vao mamboly talenta », hoy hatrany i Nagamy J. Fabrice. Mba handeha lavitra sy hitety izao tontolo izao, hanandratra avo ny anaran’i Madagasikara amin’ny alan’ny saripika ny tanjony. Ankoatra io, maniry ny hanangana sekoly fianarana manokana momba ny saripika, indray andro any!Narilala L’article Saripika – Nagamy Jean Fabrice: “Ny fitiavana no mampitombo talenta” a été récupéré chez Newsmada.
Tsimokaretina hafa… mila iadiana
Mandry ve ny tanàna? Saika nitaintain-dava ny maro tamin’ny fandalovan’ny valanaretina Covid-19… mandalo toy ny rivodoza. Mbola misy ny ramborambony any ho any: tsy hita maso, ilam-pitandremna. Sao, sanatria, mby amin’izay mahazo ny firenen-dehibe sasany amin’ny fiavy sy ny fihanaky ny valanaretina andiany faharoa amin’izao? Misy ny voatery miverina amin’ny fihibohana.Saingy, tsy ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany amin’izao ny ilam-piambenana. Eo indrindra koa ny fandriampahalemana ifotony. Misy ny sisa navelan’ny aretina tamin’ny hala-boty na ny hala-botry afitsoky ny tontakely noho ny fahaverezana asa, ny tsy fisiana… Mbola misy tsy mahafa-bela ny tsy fandriampahalemana amin’ny endrika maro, mampikaikaika ny any ifotony hatramin’izay.Anisan’izay toa efa zary mahazatra any amin’ny faritra sasany: ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana ary misy manao andiany, ohatra, ny fakana ankeriny. Ao ny tena mampiraviravy tanana ny mponina sy ny vohitra manontolo: faritra lavitra fanjakana? Na tsy hita na tsy afa-manoatra firy ny mpitandro filaminana… Na ny fampiakarana fitarainana amin’izany aza, manahirana na tsy mampiraika na tsy heno.Eo koa ny ady tany tsy mampilamina be ihany amin’ny faritra sasany; eny, na eo aza, ohatra, ny taranaka nifandimby nanajary ny tany. Mbola tsy afaka ny tarazo ratsin’ny fanjanahana amin’ny fibodoana tany? Na resy any amin’ny fitsarana aza ny sasany, manao ny ataony ihany. Eo ny ezaky ny fitondrana amin’ny fandaminana ny fananan-tany, saingy misy izay tena manahirana eny ifotony.Misy ny tsimatimanota mampiraviravy tanana: mahitahita, lehibe tsy meloka… Kolikoly avo lenta ny antony? Raha ny ezaky ny fitondrana, tsy efa tokony hihena ve ny hoe mampitaraina ny maro indrindra ny kolikoly eny amin’ny fitsarana talohaloha teo? Na ny amin’ny tsy fandriampahalemana, na ny ady tany, na ny tsimatimanota… Tsimokaretina mikiky ny firenena tena mila iadiana hatrany. Mby aiza?Rafaly Nd.L’article Tsimokaretina hafa… mila iadiana a été récupéré chez Newsmada.